Mucaaradka Somaliya ” Waxaan Ka War Helnay In Dowladda Ay Qorsheneyso Muddo Kororsi”. – Puntlandtimes
Abdi Nuur Sheekh Maxamed oo ah gudoomiyaha xisbiga Mid Qaran ee Somaliya ayaa hoosta ka xariiqay in dowlada Somaliya ay qorsheynayaan in ay sameeyaan muddo kororsi .
Dowlada madaxweyne Farmaajo ayaa mudada xukunka waxa haatan uga harsan laba sanno balse kooxaha mucaaradka ayaa ku doodaya in ay helayaan xogo ku aadan in ay jiraan qorshe dowlada ay diyaarineyso oo ku aadan muddo kororsi .
” Waxaa haatan la joogaa waqtigii dowlada ay hor marin laheyd arimaha dastuuriga , diyaarinta doorashooyinka balse dowladda arimahaas kama muuqdaan” ayuu yiri Abdi Nuur Sheekh Maxamed oo waramayay wariyaha Universal Tv ee Nairobi .
Waxa uu wasiirkaan hore ka digay waxa uu ku sheegay damaca dowladda ee muddo kororsi isaga oo ku dooday in taasi micnaheedu tahay fashil ku yimid dowlada.
” Waan ka digeynaa arintaas, waxaana dowlada ugu baaqeynaa in labada sano u hartay ay ka shaqeeyaan sidii ay u soo dhaweyn laheyd maamul goboleedyada , siyaasiinta ka soo horjeeda ayna dhageystaan taloooyinka lagu saxayo qaladaadka ka dhaca ” ayuu sii raaciyay siyaasi Abdi Nuur Sheekh Maxamed .
Arintaan ayaa imaaneysa xilli kooxaha mucaardka ay shalay kullan ku yeesheen Nairobi iyaga oo ku dooday in caburin dowladda ay kala kulmeen darteed ay ugu kulmeen Nairobi waxa ayna ka hadleen xaaladda dalka iyaga oo eedeymo kala duwan u soo jeediyay dowlada Somaliya .